ဇင်လင်း - မျက်မှောက် မြန်မာ့ နိုင်ငံရေးအရွေ့နှင့် ဂျပန်နှင့် တရုတ်နိုင်ငံတို့၏ ဗျူဟာမြောက် အခင်းအကျင်းများ - MoeMaKa Media
Home / China / Currents / Opinion / Zin Linn / ဇင်လင်း - မျက်မှောက် မြန်မာ့ နိုင်ငံရေးအရွေ့နှင့် ဂျပန်နှင့် တရုတ်နိုင်ငံတို့၏ ဗျူဟာမြောက် အခင်းအကျင်းများ
China, Currents, Opinion, Zin Linn
(မိုးမခ) စက်တင်ဘာ ၂၈၊ ၂၀၂၀
ဒီမိုကရေစီ နှင့် ရွေးကောက်ပွဲ
မျက်မှောက် မြန်မာနိုင်ငံ၏ ငြိမ်းချမ်းရေးဖြစ်စဉ်နှင့်တကွ ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ် အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲကို ပြည်တွင်းပြည်ပက အထူးစိတ်ဝင်စားစွာ စောင့်ကြည့်နေကြသည်။ အာရှနှင့်အရှေ့တောင်အာရှနိုင်ငံများကလည်း စိတ်ဝင်တစား စောင့်ကြည့် နေကြသည်။ မြန်မာ့ငြိမ်းချမ်းရေးအခြေအနေကို အာရှတိုက်၌ တရုတ်နှင့် ဂျပန်နိုင်ငံတို့က ပိုမို အလေးထား စောင့်ကြည့် လျှက်ရှိသည်။ မြန်မာနိုင်ငံ၏ ပထဝီအနေအထားသည် တရုတ်-ဂျပန် စီးပွားရေးအားပြိုင်ရာ အရှေ့တောင်အာရှနှင့် တောင် အာရှ နိုင်ငံများ၏ ဗဟိုချက်တွင် ရှိနေ၍ ဖြစ်သည်။ မြန်မာနိုင်ငံ တည်ငြိမ်အေးချမ်းရေးသည် တရုတ်၊ ဂျပန်နှင့် အိန္ဒိယတို့ အပြင် အာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံများအတွက်ပါ စီးပွားရေးနှင့်နိုင်ငံရေးအရ အရေးပါလျှက်ရှိသည်မှာ မြင်သာသည့် အချက် ဖြစ်သည်။
မြန်မာနိုင်ငံသည် ယခု ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ် နိုဝင်ဘာလ (၈)ရက်တွင် အထွေထွေ ရွေးကောက်ပွဲကြီးကို ကိုဗစ်-၁၉ ကပ်ရောဂါ အရိပ်မည်းကြီးအောက်တွင် အောင်မြင်စွာ ကျင်းပနိုင်ရန် ပြင်ဆင်လျှက်ရှိသည်။ ရွေးကောက်ပွဲဖြစ်စဉ်သည် ဒီမိုကရေစီ အသွင်ကူးပြောင်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်ထဲမှ အရေးကြီးသည့် ကိစ္စဖြစ်၍ လက်ရှိအစိုးရက အားသွန်ခွန်စိုက် ဆောင်ရွက်နေခြင်း ဖြစ်သည်။ ဒီမိုကရေစီ ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးကာလတွင် လူထုကိုယ်တိုင် အုပ်ချုပ်သည့် လူထုကိုယ်စားပြု အုပ်ချုပ်ရေးစနစ် တည်ဆောက်ရမည်ဖြစ်သောကြောင့် ပါတီစုံဒီမိုကရေစီ အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲဖြစ်စဉ်ကို မဖြစ်မနေ ကျင်းပရန် ကြိုးစား နေကြခြင်းဖြစ်သည်။ မြန်မာလူထုသည် ဒီမိုကရေစီရေးအတွက် အသက်သွေးချွေးမြောက်မြားစွာ ပေးဆပ်ထားပြီးဖြစ် သဖြင့် လွတ်လပ်၍ တရားမျှတသော ရွေးကောက်ပွဲဖြစ်မြောက်စေရန် ၀ိုင်းဝန်းကြိုးပမ်းကြပေလိမ့်မည်။ ဒီမိုကရေစီ လိုလားသော ပြည်သူလူထု၏ ၀ိုင်းဝန်းကြိုးပမ်း အားထုတ်မှုဖြင့် ရွေးကောက်ပွဲကို အောင်မြင်စွာ ကျင်းပနိုင်လိမ့်မည်ဟု ခိုင်ခိုင်မာမာ ယုံကြည်နေကြပေသည်။
နိုင်ငံတကာ အသိုင်းအဝိုင်းကလည်း မြန်မာနိုင်ငံအား နိုင်ငံရေးတည်ငြိမ်သော အရှေ့တောင်အာရှနိုင်ငံ တစ်နိုင်ငံအဖြစ် တွေ့မြင်လိုကြကြောင်း ကမ္ဘာ့သတင်းမီဒီယာမျက်နှာစာ၌ ဖေါ်ပြကြသည်။ အကြောင်းမှာ မြန်မာသည် ပထဝီနိုင်ငံရေး အခင်းအကျင်းအရ လူဦးရေ သန်းတစ်ထောင်ကျော်စီ ရှိ၍ အနုမြူလက်နက်ပိုင်ဆိုင်ထားကြသော တရုတ်နှင့် အိန္ဒိယ နိုင်ငံကြီး နှစ်နိုင်ငံကြား၌ တည်ရှိနေ၍ ဖြစ်သည်။ မြန်မာနိုင်ငံ တည်ငြိမ်အေးချမ်းရေးသည် တရုတ်၊ ဂျပန်နှင့် အိန္ဒိယတို့ အပြင် အာဆီယံအဖွဲ့ဝင် နိုင်ငံများအတွက်လည်း စီးပွားရေးနှင့် နိုင်ငံရေးအရ အရေးပါသည်ဟု ဆိုနိုင်သည်။
ပြီးခဲ့သည့် ၂၀၂၀ သြဂုတ်လ ၂၄ ရက်နေ့က ဂျပန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး မစ္စတာ မိုတေဂီ (Mr. Motegi) သည် မြန်မာနိုင်ငံ သို့ ပထမဦးဆုံး အကြိမ် အလည်အပတ် ရောက်ခဲ့သည်။ Mr. Motegi သည် ယခင်က မြန်မာနိုင်ငံသို့ သုံးကြိမ်် လာရောက် ခဲ့ဖူးသည်။ ၂၀၁၄ ခုနှစ် ခရီးစဉ် ပြီးသည့်နောက် ယခုအကြိမ်သည် ပထမဦးဆုံး ခရီးစဉ် ဖြစ်သည်။ ယခု ခရီးစဉ်တွင် မြန်မာ နိုင်ငံ၏ သိသာထင်ရှားသော ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုများကို ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျ မြင်ရလိမ့်မည်ဟု မျှော်လင့်ထားကြောင်း ဂျပန် နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး မစ္စတာ မိုတေဂီက ကြိုတင် သတင်းစကားပါးခဲ့သည်။ မစ္စတာ မိုတေဂူ၏ ကြိုတင် ‘သတင်းစကား’ ကို အစိုးရ သတင်းစာများ၌ ဖေါ်ပြခဲ့သည်။
ဂျပန်နိုင်ငံနှင့် မြန်မာနိုင်ငံတို့သည် ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ကြီး ပြီးသည့်နောက်တွင် ချစ်ကြည်ရင်းနှီးသည့် ဆက်ဆံရေးကို တသ မတ်တည်း ထိန်းသိမ်းလာခဲ့ကြကြောင်း Mr. Motegi ၏ ‘သတင်းစကား’ ၌ ဖေါ်ပြထားသည်။ အထူးသဖြင့် စစ်ကြီးပြီးခါစ စားနပ်ရိက္ခာ အကျပ်အတည်းနှင့် ကြုံတွေ့ခဲ့ရချိန်တွင် မြန်မာနိုင်ငံမှ ဆန်အမြောက်အမြား ပေးပို့ခဲ့သည့် ကျေးဇူးတရားကို မည်သည့်အခါမျှ မေ့မည်မဟုတ်ကြောင်းလည်း ဂျပန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးက ဆိုသည်။ မြန်မာနိုင်ငံသည် အာဆီယံနှင့် မဲခေါင်နိုင်ငံများထဲတွင် အဓိကအရေးပါသော အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံဖြစ်၍ ဂျပန်-မြန်မာနှစ်နိုင်ငံအကြား နှစ်ပေါင်းရှည်ကြာစွာ ချစ်ခင် ရင်းနှီးခဲ့ကြောင်း၊ နှစ်နိုင်ငံဆက်ဆံရေးသည် နိုင်ငံရေး၊ စီးပွားရေးနှင့် လူမှုဆက်ဆံရေးတွင်လည်း အလွှာစုံ အပြန်အလှန် ဆက်ဆံရေးကို တည်ဆောက်နိုင်ခဲ့ကြကြောင်း Mr. Motegi ၏ ‘သတင်းစကား’ ၌ ဖေါ်ပြထားသည်။
မြန်မာနိုင်ငံတွင် လက်ရှိ နိုင်ငံတော်၏ အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ ဦးဆောင် လမ်းညွှန်မှု အောက်တွင် ဒီမိုကရေစီအသွင်ကူးပြောင်းရေး၊ အမျိုးသားပြန်လည်သင့်မြတ်ရေးနှင့် စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး စသည့် လုပ်ငန်းစဉ် များ ဆက်လက်အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည်။ မြန်မာနိုင်ငံသည် ဂျပန်နိုင်ငံအတွက် အရေးကြီး သည့် မိတ်ဆွေနိုင်ငံဖြစ်သဖြင့် ဂျပန်နိုင်ငံအနေဖြင့် အစွမ်းကုန် ကူညီထောက်ပံ့လျက်ရှိသည်ဟု မစ္စတာ မိုတေဂီ က ဆိုသည်။ ပထမဦးဆုံး ဂျပန်နိုင်ငံသည် မြန်မာနိုင်ငံ၏ စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ခြင်းနှင့် အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများ ဖန်တီးခြင်းမှ တစ်ဆင့် မြန်မာနိုင်ငံသားများ၏ လူနေမှုအဆင့်အတန်း မြှင့်တင်ရေးကို ကူညီလျက်ရှိသည်ဟုလည်း ဆိုသည်။
၂၀၁၅ ခုနှစ်တွင် ဂျပန်နှင့် မြန်မာနှစ်နိုင်ငံစလုံးက အစိုးရ၊ ပုဂ္ဂလိကပူးပေါင်းမှုဖြင့် ဖွင့်လှစ်နိုင််ခဲ့သည့် သီလဝါ အထူး စီးပွားရေးဇုန်သည် ကုမ္ပဏီပေါင်း ၁၁၃ ခု၊ ဝန်ထမ်းပေါင်း ၁၂၄၀၀ အတွက် အလုပ်အကိုင်များကို ဖန်တီး ပေးနိုင်ခဲ့ပြီး ကြီးမားသည့် အောင်မြင်မှုကို ရရှိနေသည်ဟု ဆိုသည်။ ထို့ပြင် သီလဝါအထူးစီးပွားရေးဇုန်၏ နောက်ဆက်တွဲ အကျိုး ကျေးဇူး အသီးအပွင့်များအဖြစ် ပိုမိုကျယ်ပြန့်စွာ ကူးလူးသွားလာနိုင်စေရန် အရှေ့အနောက် စီးပွားရေးစင်္ကြံ၊ ရန်ကုန်-မန္တလေးရထားလမ်း စသည့် အခြားဒေသကြီးများနှင့် ချိတ်ဆက်မှု ခိုင်မာစေရေး လုပ်ငန်းစဉ်များကိုလည်း ဆောင်ရွက် လျက်ရှိသည်ဟု ဆိုသည်။ ထို့ပြင် အခြေခံအဆောက်အအုံများသာမက ကျန်းမာရေး၊ ပညာရေး၊ လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေး၊ အုပ်ချုပ်ရေး စွမ်းရည်မြှင့်တင်ရေး စသည့် ကဏ္ဍအသီးသီးတွင်လည်း ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည်ဟု မစ္စတာမိုတေဂီ ၏ သတင်းစကား၌ ဖေါ်ပြထားသည်။ ထို့ပြင် မြန်မာနိုင်ငံ၏ အနာဂတ်ကို မျှော်လင့်ထားကြသော ဂျပန်ကုမ္ပဏီများ၏ “တာဝန်ယူမှု ရှိသော ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု”ကို တိုးမြှင့်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိကြောင်း၊ ဂျပန်နိုင်ငံ အနေဖြင့် ယခုကဲ့သို့ ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်မှုများကို နောက်ပိုင်းတွင်လည်း ဆက်လက်လုပ်ဆောင်သွားလိုသည်ဟု မစ္စတာ မိုတေဂီ က သတင်းစကား ပါးထားသည်။
တရုတ်ကွန်မြူနစ်ပါတီ၏ အထူးသံတမန် မစ္စတာ ရန်ကျဲ့ချိ
သြဂုတ်လ ၂၄ ရက်နေ့တွင် ဂျပန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး မစ္စတာမိုတေဂီနှင့် နိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်း စုကြည်တို့တွေ့ဆုံခဲ့ကြပြီးနောက် တိုက်ဆိုင်စွာပင် တရုတ်နိုင်ငံ ကွန်မြူနစ်ပါတီ ဗဟိုနိုင်ငံခြားရေးကော်မရှင် ခေါင်းဆောင် ‘မစ္စတာ ယန်ကျဲ့ချီ’ သည်လည်း စက်တင်ဘာလ ၁ ရက်နေ့တွင် မြန်မာနိုင်ငံသို့ရောက်ရှိခဲ့ပြီး၊ နိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံ ပုဂ္ဂိုလ် နှင့် တွေ့ဆုံခဲ့ကြောင်း မြန်မာအစိုးရသတင်းစာ၌ ဖေါ်ပြသည်။ တွေ့ဆုံပွဲတွင် နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံရုံးဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးကျော်တင့်ဆွေနှင့် မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာတရုတ်သံအမတ်ကြီး ‘မစ္စတာချန်းဟိုင်’ တို့လည်း တက်ရောက်ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။ တွေ့ဆုံပွဲအပြီးတွင် မြန်မာ-တရုတ် နှစ်နိုင်ငံဆွေးနွေးပွဲကို ဆက်လက် ကျင်းပခဲ့ပြီး၊ နိုင်ငံတော်၏ အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့် တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံ တရုတ်ကွန်မြူနစ်ပါတီ၊ ဗဟိုကော်မတီ နိုင်ငံရေး ဗျူရိုအဖွဲ့ဝင် မစ္စတာ ရန်ကျဲ့ချိ တို့ တက်ရောက်ဆွေးနွေးကြသည်။
ဆွေးနွေးပွဲတွင် နှစ်နိုင်ငံ အဆင့်မြင့် ခေါင်းဆောင်များအကြား ထိတွေ့ ဆက်ဆံမှုများ ဆက်လက်မြှင့်တင်သွားရေး၊ တရုတ်နိုင်ငံက ကိုဗစ်-၁၉ ကပ်ရောဂါ ကာကွယ်ဆေး စတင်ဖြန့်ဝေချိန်တွင် မြန်မာနိုင်ငံသို့ ထောက်ပံ့သွားရေး၊ တရုတ်သမ္မတ မစ္စတာ ရှီကျင့်ဖျင်၏ မြန်မာနိုင်ငံ ခရီး စဉ်အတွင်း နှစ်ဖက်သဘောတူညီမှုရရှိခဲ့သည့် အကျိုးတူစီမံကိန်းများ အရှိ် အဟုန်မပြတ် ဆက်လက် အကောင်အထည် ဖော်ဆောင်ရေး၊ နှစ်နိုင်ငံနယ်စပ်ဒေသ တည်ငြိမ်အေးချမ်းရေး၊ မြန်မာနိုင်ငံ၏ အမျိုးသားပြန်လည် သင့်မြတ်ရေးနှင့် ငြိမ်းချမ်းရေး လုပ်ငန်းစဉ်များအတွက် တရုတ်နိုင်ငံက အပြုသဘော ဆက်လက်ကူညီပံ့ပိုးရေး၊ နှစ်နိုင်ငံ နယ်စပ်ဒေသ၌ လောင်းကစား အပါအဝင် တရားမဝင်ကိစ္စရပ်များကို ပူးတွဲ တိုက်ဖျက်သွားရေး၊ ကိုဗစ်-၁၉ ကပ်ရောဂါ ကာကွယ်၊ ထိန်းချုပ်၊ ကုသရေး လုပ်ငန်းများတွင် နှစ်နိုင်ငံ ဆက်လက်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေး၊ မြန်မာနိုင်ငံမှ ကြွေးမြီ ပေးဆပ်မည့် ကာလကို တရုတ်နိုင်ငံက ရွှေ့ဆိုင်းပေးခြင်းဖြင့် အကူအညီပေးအပ်သွားရေး၊ ကိုဗစ်-၁၉ ကပ်ရောဂါကာလ အလွန်တွင် မြန်မာ-တရုတ် နှစ်နိုင်ငံ သံတမန်ဆက်ဆံရေး နှစ် (၇၀) ပြည့် အထိမ်းအမှတ် အခမ်းအနားများနှင့် မြန်မာ-တရုတ် ယဉ်ကျေးမှုနှင့် ခရီးသွားလာရေးနှစ် ၂၀၂၀ အကောင်အထည်ဖော်ရေးအတွက် နှစ်ဖက်ညှိနှိုင်း စီစဉ်သွား ရေး၊ လူငယ်များ အပါအဝင် ပြည်သူအချင်းချင်း အပြန်အလှန် ကူးလူးဆက်ဆံမှုများ မြှင့်တင်ရန်အတွက် ယဉ်ကျေးမှုဖလှယ်မှု များ တိုးမြှင့် ဆောင်ရွက်ရေးနှင့် မြန်မာ-တရုတ်နှစ်နိုင်ငံအကြား အေးအတူပူအမျှ အသိုက်အဝန်း ထူထောင်ရေးအတွက် အကျိုးတူ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေး အစီအစဉ်များချမှတ်ရေး စသည့်ကိစ္စရပ်များ ဆွေးနွေးကြကြောင်း သိရသည်။
ထို့ပြင် တရုတ်နိုင်ငံအနေဖြင့် ရခိုင်ပြည်နယ်အရေး ဖြေရှင်းရေးကိစ္စနှင့် ပတ်သက်၍ မြန်မာနိုင်ငံ၏ ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်မှု များကို ဆက်လက် အားပေးထောက်ခံကြောင်း၊ နေရပ်စွန့်ခွာသူများ ပြန်လည်လက်ခံရေး လုပ်ငန်းစဉ်များ အောင်မြင်ရေး အတွက် ဆက်လက်ကူညီ ပံ့ပိုးသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ ဒေသတွင်းနှင့် ကုလသမဂ္ဂ အပါအဝင် နိုင်ငံတကာမျက်နှာစာတွင် မြန်မာနိုင်ငံဘက်မှ ဆက်လက်ရပ်တည် ထောက်ခံသွားမည်ဖြစ်ကြောင်းနှင့် တရုတ်နိုင်ငံအနေဖြင့် ရခိုင်ပြည်နယ်ရှိ ပြည်သူ များ၏ လူမှုစီးပွားဘဝများ ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်ရေးအတွက် ထောက်ပံ့ငွေအဖြစ် မြန်မာအစိုးရသို့ ယွမ်သန်း ၂၀၀ ပေးအပ်သွား မည်ဖြစ်ကြောင်း ပြောကြားခဲ့သည်။
မြန်မာနိုင်ငံကလည်း နိုင်ငံတကာ မျက်နှာစာ၌ တရုတ်နိုင်ငံ၏ အားပေး ထောက်ခံမှုများအတွက် ကျေးဇူးတင်ရှိကြောင်း နှင့် တရုတ်တစ်နိုင်ငံတည်း မူဝါဒနှင့် တစ်နိုင်ငံ စနစ်နှစ်မျိုးမူဝါဒတို့ကို ဆက်လက် ရပ်တည်ထောက်ခံသွားမည် ဖြစ်ကြောင်း ထပ်မံအတည်ပြုခဲ့သည်။ ကုလသမဂ္ဂ လုံခြုံရေးကောင်စီ၌ တပ်မတော်၏ လူ့အခွင့်အရေးဆိုင်ရာ စွပ်စွဲပြစ်တင်ခံရမှုများ ကြောင့် မြန်မာအစိုးရ အဆက်ဆက်သည် တရုတ်နိုင်ငံ၏ ဗီတိုအာဏာကို အားကိုးခဲ့ရသည်။ ထို့ကြောင့် တရုတ်တစ်နိုင်ငံ တည်း မူဝါဒနှင့် တစ်နိုင်ငံ စနစ်နှစ်မျိုးမူဝါဒတို့ကို ဆက်လက် ရပ်တည်ထောက်ခံသွားရုံမှတပါး အခြားရွေးရန် မရှိခဲ့ပေ။
၂၀ ရာစုနှစျ နှောငျးပိုငျးတှငျ ဂပြနျနှငျ့ တရုတျနိုငျငံတို့သညျ အာရှတိုကျ၏ နိုငျငံရေးမကြျနှာစာ၌ အတောျပွငျးပွငျးထနျထနျ ပွိုငျဆိုငျခဲ့ကွသညျ။ ထိုစဉျက တရုတျနိုငျငံသညျ နိုငျငံရေးအရ ထိပျတနျးအငျအားကွီးနိုငျငံ (Super Power) ဖွစျခဲ့သညျ။ အဘယျကွောငျ့ဆိုသောျ ကမ်ဘာ့ကုလသမဂ်ဂ လုံခွုံရေးကောငျစီအဖှဲ့ဝငျ ၅ နိုငျငံအနကျ တရုတျက တစျနိုငျငံဖွစျ၍ ဗီတို အာဏာပိုငျဆိုငျထားသညျ။ ထို့ကွောငျ့ တရုတျက နိုငျငံရေးပါဝါအရ ဂပြနျထကျ အငျအားကွီးသညျ။ သို့ရာတှငျ ထိုအခြိနျ က ဂပြနျသညျ ကမ်ဘာ့စီးပှားရေးနယျပယျ၌ စီးပှားရအေငျအားကွီးနိုငျငံ (Economic Super Power) ဖွစျခဲ့သညျ။ စကျမှု လကျမှု နညျးပညာအရာ၌လညျး ဂပြနျက ဆရာကွီးတစျဆူဖွစျခဲ့သညျ။ ဂပြနျကို ယှဉျနိုငျရနျ တရုတျအနဖွေငျ့ စီးပှားရေး အငျအား ဖွညျ့တငျးဖို့လိုသညျ။ စီးပှားရေးတောငျ့တငျးရနျအတှကျ စကျမှုသိပ်ပံနညျးပညာအရာ၌ ဝါယမစိုကျထုတျ ဖွညျ့ ဆညျးရနျ လိုပွနျသညျ။ ထို့ကွောငျ့ တရုတျသညျ ကမ်ဘာရနျဖွစျခဲ့ဖူးသော ဂပြနျအား သညျးခံပေါငျးသငျးဆကျဆံခဲ့သညျ။
အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် ဂျပန်၏ခေတ်မီ အဆင့်မြင့် စက်မှုလုပ်ငန်းကြီးများကို တရုတ်ပြည်တွင် လာရောက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံရန် ဖိတ်ခေါ်လို၍ ဖြစ်သည်။ ထိုနည်းအားဖြင့် တစ်ချက်ခုတ် သုံးချက်လောက်ပြတ်အောင် တရုတ်က ဂျပန်ကို ချော့၍ ဆက်ဆံ ခဲ့သည်။ ထိုနည်းအားဖြင့် ဂျပန်စီးပွားရေးရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကို တရုတ်က ရရှိခဲ့ရုံမက ကုန်ထုတ်လုပ်မှု နည်းပညာများလည်း ဂျပန်ထံမှ ရရှိခဲ့သည်။ ထို့ပြင် တရုတ်အလုပ်သမား အမြောက်အမြားကိုလည်း အလုပ်အကိုင်များ ဖန်တီးပေးနိုင်ခဲ့သည်။
တန်ရှောင်ပင်းလက်ထက်တွင် တရုတ်လူငယ်များ နိုင်ငံတကာတွင် ပညာသင်နိုင်ရန် တံခါးဖွင့်ပေးခဲ့ခြင်းကြောင့်လည်း ၂၀၀၀ ပြည့်လွန်နှစ်များတွင် အကျိုးများစွာ ဖြစ်ထွန်းခဲ့သည်။ ဤသို့ဖြင့် ၂၁ ရာစုဆန်းချိန်တွင် တရုတ်သည် စီးပွားရေး အရလည်း အင်အားကြီးလာခဲ့သည်။ အင်အားကြီးလာသောအခါ အရှေ့တောင်အာရှနိုင်ငံငယ်များအပေါျ သွဇာလှှမျးမိုး နိုငျရေးအတှကျ ဂပြနျနှငျ့ ဆကျလကျ အားပွိုငျခဲ့သညျ။ မွနျမာအပါအဝငျ အာဆီယံအဖှဲ့ဝငျ နိုငျငံမြားသညျ တရုတျ-ဂပြနျ ပါဝါပွိုငျပှဲတှငျ မိမိတို့၏ အမြိုးသားအကြိုးစီးပှာမြား မပှနျးပဲ့စရေနျ နိုငျငံရေးသတိဖွငျ့ ဂရုပွု ဆကျဆံခဲ့ကွရသညျ။ ဂပြနျ၏ ရညျရှယျခကြျက ရိုးရှငျးသညျ။ ကမ်ဘာ့လူဦးရအေမြားဆုံး တရုတျနိုငျငံဆိုသညျ့ ဈေးကှကျကွီးကို လကျမလှတျရရေး အတှကျ တရုတျနှငျ့ အဆငျပွအေောငျဆကျဆံခဲ့သညျ။
ငြိမ်းချမ်းရေးပြဿနာ၊ NCA စာချုပ် နှင့် တရုတ်၏ သြဇာ
တရုတ်နိုင်ငံ ဘေကျင်းမြို့၌ ၂၀၁၇ မေလ ၁၄ နှင့် ၁၅ ရက်တွင် ကျင်းပခဲ့သော Belt and Road Forum သို့ မြန်မာနိုင်ငံမှ နိုင်ငံတော် အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် တက်ရောက်ခဲ့ သည်။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်သည် တရုတ်သမ္မတ ရှီကျင့်ဖျင် (Xi Jinping)နှင့် မေလ ၁၆ ရက်တွင် ဘေကျင်းမြို့၌ တွေ့ဆုံခဲ့သည်။ တွေ့ဆုံစဉ် ရှီကျင့်ဖျင့်က မြန်မာ့ ငြိမ်းချမ်း ရေးလုပ်ငန်းစဉ် တိုးတက်ရေးအတွက် ကူညီသွားလိုကြောင်း၊ မြန်မာ-တရုတ် နှစ်နိုင်ငံနယ်စပ် တည်ငြိမ် အေးချမ်းရေး အတွက် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရန် ဆန္ဒရှိကြောင်း စသည်ဖြင့် ပြောကြားခဲ့သည်ဟု ဆင်ဟွာသတင်း က ဖော်ပြခဲ့သည်။
ယင်းမတိုင်မီ ၂၀၁၇ ခုနှစ် မတ်လ ၁၄ ရက်နေ့က တရုတ်-မြန်မာနယ်စပ်တွင် စစ်ရေးလှုပ်ရှားနေသည့် မြောက်ပိုင်း မဟာမိတ် အဖွဲ့ ဝင် ၄ ဖွဲ့ ( ကချင် လွတ်လပ်ရေး အဖွဲ့ (KIA)၊ ပလောင် (တအန်း) အမျိုးသား တပ်မတော် (TNLA)၊ ရက္ခိုင့်စစ်တပ် (AA)၊ ကိုးကန့် အဖွဲ့ (MNDAA) နှင့် တရုတ် နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန အာရှရေးရာ အထူးကိုယ်စားလှယ် မစ္စတာ ဆွန်ကော့ရှန် (Sun Guoxiang) တို့ တရုတ်နိုင်ငံ ကူမင်းမြို့ World Trade Center ၌ တတိယအကြိမ် တွေ့ဆုံ ခဲ့ကြောင်း မီဒီယာသတင်းများ ထွက်ပေါ်ခဲ့သည်။ ထို့နောက် ၂၀၁၇ မေလ ၁၁ ရက်နေ့တွင် World Trade Center ၌ စတုတ္ထအကြိမ် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်ဟု မီဒီယာ သတင်းများတွင် ဖော်ပြခဲ့သည်။
ထို့ပြင်၂၀၁၈ ခုနှစ် ဇူလိုင်လတွင် KIO အဖွဲ့က ဦးဆောင်ကျင်းပခဲ့သော တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ခေါင်းဆောင် များ၏ မိုင်ဂျာယန် ထိပ်သီးအစည်းအဝေးကြီးအတွင်း၌လည်း တရုတ်အထူးသံတမန် မစ္စတာ ဆွန်ကော့ရှန်က ၂၁-ရာစု ပင်လုံညီလာခံတက်ရန် တိုက်တွန့်းခဲ့သည်။ ဘေဂျင်းအစိုးရကလည်း တက်ရောက်ရန် ဆော်သြခဲ့သည်။ ၂၀၁၈ နိုဝင်ဘာ (၁၀)တွင် “ပူးတွဲစောင့်ကြည့်ရေးကော်မတီ” (JMC) သို့ တရုတ်နိုင်ငံက အမေရိကန် ဒေါ်လာသုံးသိန်း လှူဒါန်းခဲ့သည်။ အခမ်းအနားတွင် မစ္စတာ ဆွန်ကော့ရှန်က တရုတ်နိုင်ငံအနေဖြင့် မြန်မာ့ ငြိမ်းချမ်းရေး လုပ်ငန်းစဉ်ကို အလေးထား ကြောင်း၊ တစ်နိုင်ငံလုံး အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေးစာချုပ် (NCA) လက်မှတ်ရေး ထိုးထားခြင်း မရှိသေးသော EAO များနှင့် ပတ်သက်၍ တရုတ်နိုင်ငံက အစွမ်းကုန် ကူညီဆောင်ရွက်ပေးမည်ဖြစ်ကြောင်း ပြောကြားခဲ့သည်။
ပထဝီဝင်နိုင်ငံရေး အခင်းအကျင်းအရ ၂၀၀၀ ပြည်နှစ်ကာလအထိ ဂျပန်၏ စီးပွားရေး ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု အင်အားသည် အရှေ့ တောင်အာရှဒေသတွင် အားကောင်းခဲ့သည်။ နောက်ပိုင်း၌ ဂျပန်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု နယ်ပယ်အတွင်းသို့ တရုတ်က ထိုးဖောက် ဝင်ရောက်ခဲ့သည်။ ၂၀၁၅ ခုနှစ်အတွင်း တရုတ်ကုမ္ပဏီများက အရှေ့တောင်အာရှဒေသတွင် တိုက်ရိုက် နိုင်ငံခြားရင်းနှီး မြှုပ်နှံမှု (FDI) အမေရိကန် ဒေါ်လာ ၁၄ ဘီလီယံခွဲကျော် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခဲ့သည်။ ယင်းပမာဏမှာ ၂၀၁၄ ခုနှစ် ကထက် ၂ ဆတိုးလာခြင်း ဖြစ်သည်။ ယခင် ဆယ်စုနှစ်ကထက် အဆပေါင်းများစွာ တိုးမြင့်လာခြင်း ဖြစ်သည်။ တရုတ် နိုင်ငံသည် ဒေါ်လာ ဘီလီယံ ထောင်ပေါင်းများစွာ စုဆောင်းထားနိုင်သဖြင့်လည်း နိုင်ငံခြား ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ကဏ္ဍ၌ အများ အပြား ပိုင်ဆိုင်လာခဲ့သည်။ ဤသို့ဖြင့် တရုတ်နိုင်ငံသည် ကမ္ဘာ့အင်အားကြီး နိုင်ငံအဖြစ် အသွင်ပြောင်းလာခဲ့သည်။
တရုတ်နိုင်ငံအနေဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံအား နိုင်ငံရေးအရကူညီနေသကဲ့သို့ ငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်အတွက်လည်း ဘဏ္ဍာရေး အကူအညီများ ပေးနေကြောင်း၊ ယခု ဒေါ်လာသုံးသိန်း လှူဒါန်းမှုသည် အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၃ သန်းစီမံချက်တွင် ပါ၀င် ကြောင်း၊ တရုတ်နိုင်ငံသည် မြန်မာနိုင်ငံအတွက် ယုံကြည်အားကိုးထိုက်သော နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံဖြစ်သည်ကို အလေးအနက် ပြောလိုကြောင်း စသည်ဖြင့် ပြောကြားခဲ့သည်။ အစိုးရ၊ တပ်မတော်နှင့် တရုတ်မြန်မာ နယ်စပ် ဒေသတစ်လျှောက်ရှိ NCA လက်မှတ်ရေးထိုးထားခြင်း မရှိ သေးသော EAO များအကြား တရုတ်နိုင်ငံ အထူးသံတမန်က ကြားဝင်ညှိနှိုင်းနေသည့် သဘောတွေ့ရသည်။
အထူးသဖြင့် ‘ပြည်ထောင်စု နိုင်ငံရေး ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းရေးကော်မတီ’(FPNCC) ခေါ် မြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်အဖွဲ့အား အစိုးရနှင့် တပ်မတော်တို့ဦးဆောင်သည့် နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲများတွင် ပါ၀င်ညှိနှိုင်းမှုပြုရန် တရုတ်နိုင်ငံက တွန်းအားပေး ခဲ့သည်။ မြန်မာနိုင်ငံတွင် ငြိမ်းချမ်းရေးနှင့် တည်ငြိမ်မှု မရှိပါက တရုတ်နိုင်ငံ၏ BRI စီမံကိန်းနှင့် ဆက်စပ်လျှက်ရှိသော “တရုတ်-မြန်မာ စီးပွားရေးစင်္ကြ ံ” (CMEC) စီမံကိန်းအား ထိခိုက်မည်ကို တရုတ်က စိုးရိမ်နေသည်။ CMEC စီမံကိန်း၌ တရုတ်နိုင်ငံပါ၀င်နေခြင်းကြောင့် မြန်မာ့ငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်အပေါ် တရုတ်၏ သြဇာသက်ရောက်မှု ရှိနေသည်ဟု ဝေဖန်မှုများလည်း ရှိသည်။ CMEC စီမံကိန်းများ အကောင်အထည်ဖေါ်စဉ်က တရုတ်နှင့် မြန်မာအာဏာပိုင်များသည် လူ့အခွင့်အရေးချိုးဖေါက်မှုများ ကျူးလွန်ခဲ့ကြောင်း သတင်းများလည်း ထွက်ပေါ်ခဲ့သည်။ လျှော်ကြေးမပေးဘဲ မြေယာ သိမ်းယူသည့် ပြဿနာများလည်း ရှိခဲ့သည်။ ယင်းလူ့အခွင့်အရေးကိစ္စတွင် နစ်နာဆုံးရှုံးမှုများအတွက် တရုတ်နှင့် မြန်မာ အာဏာပိုင်များက တာဝန်ယူဖြေရှင်းပေးရန် တောင်းဆိုမှုများ ရှိခဲ့သည်။
မြန်မာနိုင်ငံအမျိုးသား ပြန်လည်သင့်မြတ်ရေး နှင့် ဂျပန်၏ အခန်းကဏ္ဍ
အလားတူ ဂျပန်အစိုးရ ၀န်ကြီးအဖွဲ့သည် ၂၀၁၃ ဖေဖော်ဝါရီ ၁၉ ရက်တွင် နိပွန်ဖောင်ဒေးရှင်းဥက္ကဋ္ဌ မစ္စတာယိုဟဲအိ ဆာဆာကာဝါ (Yohei Sasakawa) ကို မြန်မာနိုင်ငံအမျိုးသား ပြန်လည်သင့်မြတ်ရေးဆိုင်ရာ ဂျပန်အစိုးရ၏ အထူး ကိုယ်စားလှယ်အဖြစ် ခန့်အပ်ရန် အတည်ပြုခဲ့သည်။ ဖေဖော်ဝါ ရီ ၂၅ ရက်တွင် နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး ‘ဖူမီ အိုကီရှီဒါ’ (Fumio Kishida) က ‘ဆာဆာကာဝါ’ အား ၀န်ကြီးအဖွဲ့၏ ခန့်အပ်လွှာ ပေးအပ်ခဲ့သည်။ မစ္စတာဆာဆာကာဝါသည် ဂျပန်အစိုးရ၏ အထူး ကိုယ်စားလှယ်အဖြစ် ခန့်အပ်ခြင်း မခံရမီ ကပင် မြန်မာ့ငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်များတွင် ပူးပေါင်း ပါ၀င်နေသော ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးလည်း ဖြစ်သည်။ ဆာဆာကာဝါသည် ၂၀၁၁ ဒီဇင်ဘာတွင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အား တွေ့ဆုံခဲ့၍ ချက်သမ္မတ ဟောင်း ‘ဗက်စလက် ဟာဗယ်’ (Václav Havel) ၏ ‘ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ထံ ပေးစာ’ ကို ပေးအပ်ခဲ့သူ ဖြစ်သည်။
မြန်မာ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စု ဝန်ကြီး ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့် ဂျပန် နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး မစ္စတာ ဖူမိအို ကိရှိဒ တို့ ၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ မေလ (၃) ရက်နေ့တွင် နေပြည်တော်ရှိ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန၌ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့စဉ်က ဂျပန် နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးက သတင်းမီဒီယာများ၏ မေးမြန်းချက်နှင့် စပ်လျဉ်း၍ မြန်မာနိုင်ငံကို အခြေခံအားဖြင့် ယုံကြည် စိတ်ချရသည့် မိတ်ဆွေနိုင်ငံအနေဖြင့် အစွမ်းကုန် ကူညီသွားမည်ဟု ဆိုခဲ့သည်။ မြန်မာအစိုးရ အလေးအနက်ထားသည့် အခြေခံအဆောက်အအုံ တည်ဆောက်ရေးနှင့် ဘဏ္ဍာရေး၊ ငွေရေးကြေးရေး အစရှိသည့် ကဏ္ဍများတွင် ကူညီဆောင်ရွက် သွားမည်ဟု ပြောခဲ့သည်။ ကူညီဆောင်ရွက်မည့် အစီအမံများကို မြန်မာ အစိုးရနှင့် သေချာစွာဆွေးနွေးပြီး မြန်မာနိုင်ငံ၏ အမှန်တကယ်လိုအပ်ချက်များကို နိုင်ငံတော်၏ အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်နှင့် တိုင်ပင်ဆွေးနွေးကာ ဆက်လက် ကူညီ ဆောင်ရွက် သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ မြန်မာနိုင်ငံ၏ ပြည်တွင်းငြိမ်းချမ်းရေးရရှိရေးနှင့် အမျိုးသားရင်ကြားစေ့ရေးဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်များတွင် လည်း ကူညီဆောင်ရွက်ပေးနေကြောင်း၊ အဆိုပါကိစ္စနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ဂျပန်အစိုးရ၏ အထူးကိုယ်စားလှှယ် မှတစ်ဆင့် ဆက်လက် ကူညီဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း ရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့သည်။
အလားတူ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ဂျပန်သတင်းမီဒီယာသမားတစ်ဦး၏ မေးမြန်းချက်နှင့် စပ်လျဉ်း၍ ဂျပန်အစိုးရ၏ မြန်မာနိုင်ငံအပေါ် ဆက်ဆံရေးသည် အနောက်နိုင်ငံများနှင့် မတူသည်မှာ သဘာဝကျကြောင်း၊ ဒီမိုကရေစီစနစ်ကို ယုံကြည်လျှင် မတူကွဲပြားမှုများကို လက်ခံနိုင်ရမည် ဖြစ်ကြောင်း၊ မတူကွဲပြားမှုများကို အခြေခံ၍ ဂျပန်နိုင်ငံနှင့် မြန်မာ နိုင်ငံတို့သည် အချင်းချင်း ဆွေးနွေးတိုင်ပင် ဆောင်ရွက်ခဲ့သည်မှာ ကြာမြင့်ခဲ့ပြီဖြစ်သည်ဟု ဖြေကြားခဲ့သည်။ အချုပ် အားဖြင့် လက်ရှိ အစိုးရက မြန်မာ-ဂျပန် ဆက်ဆံရေးကိုလည်း အလေးထား ဆောင်ရွက်နေသည်ကို တွေ့ရသည်။
ဂျပန်နိုင်ငံက ဂျပန် နိုင်ငံအစိုးရ၏ အထူးကိုယ်စားလှယ် Mr. Sasakawa Yohei ဦးဆောင်သည့် ရွေးကောက်ပွဲ လေ့လာ ရေးအဖွဲ့ကို စေလွှတ်ပြီး အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲကြီး အဆင်ပြေ ချောမွေ့စွာ ကျင်းပနေပုံများကို မြန်မာနိုင်ငံသားများနှင့် အတူ ဝိုင်းဝန်းလေ့လာ အားပေးသွားမည်ဟု ဆိုသည်။ ထို့ပြင် မြန်မာတစ်နိုင်ငံလုံးရှိ မဲရုံများအားလုံးတွင် တစ်ကြိမ်ထက် ပို၍ မဲပေးခြင်းမှ ကာကွယ်နိုင်ရန်အတွက် အလွယ်တကူ ဖျက်ပစ်၍မရသည့် မင်ရည်များကို ထောက်ပံ့ပေးအပ်ခြင်းဖြင့် လွတ်လပ်၍ တရားမျှတမှုရှိသော ရွေးကောက်ပွဲကျင်းပနိုင်ရန် ကူညီခဲ့သည်။ ဂျပန်နိုင်ငံသည် မြန်မာနိုင်ငံ၏ စစ်မှန်သည့် မိတ်ဆွေရင်းချာအဖြစ် မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံ တည်ဆောက်ရေးအတွက် အစိုးရ၊ ပုဂ္ဂလိက ပူးပေါင်း၍ ဘက်ပေါင်းစုံ ဆက် လက် ကူညီပံ့ပိုးသွားမည်ဟု ဆိုသည်။ မြန်မာ့ငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်နှင့်စပ်လျဉ်း၍ ဂျပန်နိုင်ငံ၏ အမြင်ကို လေ့လာသည့် အခါ ၂၀၁၆ နိုဝင်ဘာလ ၂ ရက်နေ့က ဂျပန်နိုင်ငံဝန်ကြီးချုပ် Mr.Shinzo Abe နှင့် ဂျပန်နိုင်ငံ၏ အထူးဧည့်သည်တော် အဖြစ် လာရောက်လည်ပတ်သော ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော််၏ အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်တို့ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့သည့် ဖြစ်စဉ်မှာ အရေးပါပေသည်။
ဝန်ကြီးချုပ် မစ္စတာ ရှင်ဇိုအာဘေး က မြန်မာအစိုးရ၏ ဦးစားပေးလုပ်ငန်းစဉ်ဖြစ်သည့် အမျိုးသားပြန်လည်သင့်မြတ်ရေးနှင့် ပတ်သက်၍ မြန်မာနိုင်ငံ အမျိုးသားပြန်လည်သင့်မြတ်ရေးဆိုင်ရာ ဂျပန်နိုင်ငံအစိုးရ အထူးကိုယ်စားလှယ် Mr.Yohei Sasakawa နှင့်အတူ လက်တွဲပြီး နိုင်ငံတော်၏ အတိုင်ပင်ခံ ပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို ကူညီဆောင်ရွက်သွားမည် ဖြစ်ကြောင်း၊ မြန်မာနိုင်ငံ၏ထူးခြားသောလက္ခဏာ ဖြစ်သည့် မတူကွဲပြားမှုများကို အင်အားတစ်ရပ်အဖြစ်ပြောင်းလဲမည့် ကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုကိုကြိုဆိုကြောင်း၊ ငြိမ်းချမ်းရေးတိုးတက်မှု ကို အထောက်အကူပြုစေရန် တိုင်းရင်းသားလူမျိုးစုများ နေထိုင်ရာဒေသများသို့ ငါးနှစ်အတွင်း ဂျပန်ယန်းဘီလီယံ ၄၀ ကို ထောက်ပံ့ပေးသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း ပြောကြားခဲ့သည်။ သိမ်မွေ့သော စိန်ခေါ်မှုကို ရင်ဆိုင်နေရသည့် ရခိုင်ပြည်နယ်၏ တည်ငြိမ်အေးချမ်းရေးကို အထောက်အကူပြုမည့် ထောက်ပံ့မှုများလည်း ပေးအပ်သွားမည်ဖြစ်သည်ဟု ဂျပန်ဝန်ကြီးချုပ် မစ္စတာ ရှင်ဇိုအာဘေး က ပြောကြားခဲ့ဖူးသည်။
ဝန်ကြီးချုပ် မစ္စတာ ရှင်ဇိုအာဘေး က အမျိုးသားပြန်လည်သင့်မြတ်ရေးကို စီးပွားရေးနယ်ပယ်မှတစ်ဆင့် အထောက်အပံ့ ပေးသွားနိုင်ရန် အတွက် တိုင်းဒေသကြီးနှင့် ပြည်နယ်များအကြား ဘက်ညီမျှတစွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရန်ရည်ရွယ်သောမူဝါဒကို ဘက်ပေါင်းစုံမှ ထောက်ခံအားပေးသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း ထိုစဉ်က ပြောကြားခဲ့ပြီး၊ “ဂျပန်-မြန်မာ ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်ရေး အစီအစဉ်” တွင် မြို့ပြနှင့်ကျေးလက် ဟန်ချက်ညီညီ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် ရည်ရွယ်ထားပြီး ဂျပန်နိုင်ငံအစိုးရ အနေဖြင့် တိုင်းရင်းသားလူမျိုးစုများနေထိုင်ရာဒေသများအတွက် အထောက်အပံ့၊ လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေး၊ ရန်ကုန်မြို့တော် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး၊ လျှပ်စစ်၊ လေဆိပ်၊ လူ့စွမ်းအား အရင်းအမြစ် ပြုစုပျိုးထောင်ရေးအပါအဝင် အစိုးရ၏ အထောက်အပံ့ များ နှင့် ပုဂ္ဂလိကလုပ်ငန်းရှင်များ၏ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများဖြင့် ၂၀၁၆ ခုနှစ်မှစ၍ငါးနှစ်အတွင်းစုစုပေါင်း ဂျပန်ယန်း ဘီလီယံ (၈၀၀) ပမာဏကို ထောက်ပံ့သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ ထိုထောက်ပံ့မှု၏ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအဖြစ် ရေအားလျှပ်စစ်ထုတ် စက်ရုံ ပြုပြင်မွမ်းမံခြင်းနှင့် ပြည်သူ့ဆေးရုံများတိုးချဲ့ခြင်းတို့အတွက်လည်း ထောက်ပံ့သွားလိုကြောင်း ပြောကြားခဲ့သည်။
‘နိပွန်ဖေါင်ဒေးရှင်း’ ကို ဦးဆောင်သူ ဆာဆာကာဝါ
ဂပြနျနိုငျငံဝနျကွီးခြုပျ Mr.Shizo Abe ၏ ပွောကွားခကြျမြားနှငျ့ ပတျသကျ၍ နိုငျငံတောျ၏ အတိုငျပငျခံပုဂ်ဂိုလျ ဒေါျအောငျ ဆနျးစုကွညျက မိမိတို့၏ ရညျမှနျးခကြျမြားနှငျ့ တစျထပျတညျးကသြညျဟု ပွောကွားခဲ့သညျ။ အထူးသဖွငျ့ တညျငွိမျရေး နှငျ့ ငွိမျးခမြျးရေးဆိုငျရာ အထောကျအပံ့မြားနှငျ့ ပတျသကျ၍ မွနျမာနိုငျငံအမြိုးသား ပွနျလညျသငျ့မွတျရေးဆိုငျရာ ဂပြနျ အစိုးရ အထူးကိုယျစားလှယျ Mr.Sasakawa နှငျ့ အားလုံးသော မိတျဆှမြေား၏ ထောကျပံ့ အားပေးမှုမြားကို ကြေးဇူးတငျရှိ ပါကွောငျး၊ ဂပြနျနိုငျငံက ကူညီမညျ့ ဂပြနျယနျးငှေ ၄၀ ဘီလီယံကို အကောငျးဆုံး၊အကြိုးရှိရှိ အသုံးပွုသှားလိုကွောငျး၊ ရခိုငျပွညျနယျကိစ်စနှငျ့ပတျသကျ၍ ဥပဒဘေောငျအတှငျးမှ ဖွရှေငျးနိုငျအောငျ ကွိုးစားမညျဖွစျကွောငျး၊ ရခိုငျပွညျနယျ အရေးကိစ်စကို ရခိုငျပွညျနယျ ဖှံ့ဖွိုးတိုးတကျမှုဖွငျ့ ဖွရှေငျးနိုငျမညျဟူသော ထငျမွငျယူဆခကြျမြား ရှိနပွေီး မွနျမာ အစိုးရ အနဖွေငျ့ ကွိုးပမျးလကြျရှိကွောငျး စသညျဖွငျ့ ဒေါျအောငျဆနျးစုကွညျက ပွနျလညျပွောကွားခဲ့သညျ။ ၎င်းငျးဖွစျစဉျမြားကို ထောကျရှုလြှငျ မွနျမာ့တညျငွိမျအေးခမြျးရေးကဏ်ဍတွင် ဂျပန်နိုင်ငံ၏ အခန်းကဏ္ဍကလည်း တရုတ်နိုင်ငံနှင့် တန်းတူ အရေးပါသည်ကို တွေ့ရသည်။
‘နိပွန်ဖေါင်ဒေးရှင်း’ ကို ဦးဆောင်သူ ဆာဆာကာဝါ (Mr. Sasakawa Yohei) သည် ၂၁-ရာစုပင်လုံ ညီလာခံကို ထောက်ခံ သောအားဖြင့် ၂၀၁၈ ခုနှစ်တွင် မြန်မာနိုင်ငံအနှန့်လှည့်လည်၍ တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်များနှင့် တွေ့ဆုံခဲ့သည်။ ‘နိပွန်ဖေါင်ဒေးရှင်း’ က ၂၀၁၂ ခုနှစ်မှ စတင်၍ စစ်ဒဏ်ခံ လူတစ်သန်းခန့်အတွက် အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၂၁ သန်း (ကျပ်ငွေ ၂၈ ဒဿမ ၆ ဘီလီယံ) တန်ဖိုးရှိ အစားအသောက်နှင့် လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှု အကူအညီ များ ပေးပို့ ထောက်ပံ့ ခဲ့သည်။ ‘ကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံး’ (KNU)ထိန်းချုပ်ရာဒေသများသို့လည်း ‘နိပွန်ဖေါင်ဒေးရှင်း’ က လူသားချင်း စာနာ ထောက်ထားမှု အကူအညီများ ပေးပို့ထောက်ပံ့ခဲ့သည်ဟု ဆာဆာကာဝါက ဆိုသည်။ KNU သည် တစ်နိုင်ငံလုံး အပစ် အခတ် ရပ်စဲရေးစာချုပ် (NCA) လက်မှတ်ရေးထိုးပြီးသည့်အတွက် ငြိမ်းချမ်းရေးအကျိုးအမြတ်ကို ခံစားနေရပြီဟု သူက ဆိုသည်။ စာသင် ကျောင်းများ၊ ကျန်းမာရေးဆေးခန်းများ၊ အခြားအဆောက်အအုံများ အများအပြား KNU ထိန်းချုပ်ရာ ဒေသများတွင် ရှိနေကြပြီဟု ဆာဆာကာဝါက ဆိုသည်။ မြန်မာ့ငြိမ်းချမ်းရေးနှင့် ဖွ့ံဖြိုးတိုးတက်မှုများကို ကူညီရန် ဂျပန် ၀န်ကြီးချုပ် ရှင်ဇိုအာဘေး က အမေရိကန်ဒေါ်လာ သန်း(၁၀၀) ခန့် ခွင့်ပြုပေးပြီးဖြစ်ကြောင်း မစ္စတာ ဆာဆာကာဝါ က ဆိုသည်။
၂၀၁၈ ဖေဖေါ်ဝါရီ ၁၃ ရက်နေ့တွင် မွန်ပြည်သစ်ပါတီ(NMSP) နှင့် လားဟူဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ (LDU)တို့၏ NCA စာချုပ် လက်မှတ်ရေးထိုးသည့် အခမ်းအနားသို့ ဂျပန်၏ အထူးသံတမန် မစ္စတာ ဆာဆာကာဝါလည်း နိုင်ငံတကာသက်သေ အဖြစ် တက်ရောက်ခဲ့သည်။ ၂၀၁၈ ဖေဖေါ်ဝါရီ ၁၃ ရက်နေ့မှာပင် ဂျပန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး တာရိုခိုနို( Taro Kono) က ကြေညာချက်တစ်စောင်ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။ ကြေညာချက်၌ ဂျပန်အစိုးရအနေဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံတွင် ငြိမ်းချမ်းရေးဖြစ်စဉ်များ ဆက်လက်တိုးတက်ဖြစ်ထွန်းစေလိုကြောင်း၊ တစ်နိုင်ငံလုံး အပစ်အခတ် ရပ်စဲရေး စာချုပ် (NCA) လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး သည့် ဒေသများတွင် အကူအညီ အထောက်အပ့ံများ ပေးသွားလိုကြောင်း စသည်ဖြင့် အလေးထားဖေါ်ပြခဲ့သည်။ လက်ရှိ အချိန်အထိ ဂျပန်အစိုးရသည် နိပွန်ဖေင်ဒေးရှင့်းကဲ့သို့သော အစိုးရမဟုတ်သည့် အဖွဲ့များနှင့် ပူးပေါင်းကာ နေအိမ်များ၊ ကျောင်းများ၊ ဆေးရုံများ၊ တံတားများကို (အထူးသဖြင့် ကရင်ပြည်နယ်တွင်) ဆောက်လုပ်ပေးလျှက်ရှိပြီး၊ အနာဂတ်တွင် လည်း ပြည်ထောင်စုအစိုးရ၊ ပြည်နယ်တိုင်း အစိုးရများနှင့် ညှိနှိုင်းတိုင်ပင်၍ ပြန်လည်ထူထောင်ရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ထောက်ပ့ံမှုများကို ဆက်လက်ဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ မွန်ပြည်နယ်အတွင်းရှိ စစ်ဘေးဒဏ်သင့် ပြည်သူများ အတွက်လည်း ထောက်ပံ့မှုများ တိုးမြှင့်ပေးသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း ဂျပန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး တာရိုခိုနို ၏ ကြေညာချက်၌ ဖေါ်ပြထားသည်။
အထူးစီးပွားရေးဇုံကိစ္စ အွန်လိုင်း နှီးနှောဖလှယ်ပွဲ
၂၀၂၀ ဇူလိုင်လ ၂၉ ရက်နေ့တွင် နိုင်ငံတော်၏ အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်သည် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဆိုင်ရာ အွန်လိုင်း နှီးနှောဖလှယ်ပွဲတစ်ရပ်ပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်း Nikkei Asian Review ၌ ဖေါ်ပြသည်။ အထူးစီးပွားရေးဇုံ အသစ်တွင် ဂျပန်နိုင်ငံ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံရန် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ဖိတ်ခေါ် (Suu Kyi courts Japan investment with new economic zone) ဆိုသော ခေါင်းစဉ်ဖြင့် Nikkei Asian Review က ဖေါ်ပြခဲ့သည်။ ယင်းအွန်လိုင်းအစည်းအဝေးသို့ ဂျပန်စီးပွားရေး လုပ်ငန်းများအဖွဲ့ချုပ် (Japan Business Federation) အပါအဝင် ဂျပန်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ ပါ၀င်တက်ရောက်ခဲ့သည်။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစု ကြည် က အလုပ်အကိုင်သစ်များ ဖန်တီးဖေါ်ထုတ်ပေးရေးသည် မြန်မာနိုင်ငံ ဖွ့ံဖြိုးရေးစီမံကိန်းတွင် ပဓါနအကျဆုံး ကဏ္ဍ အဖြစ် တည်ရှိနေဆဲဖြစ်သည်ဟု ယင်းအစည်းအဝေး၌ ပြောကြားသည်။
သို့ဖြစ်၍ အစိုးရအနေဖြင့် မွန်ပြည်နယ်တွင် အထူး စီးပွားရေးဇုံတစ်ခု တိုးချဲ့တည်ဆောက်သွားရန်ရှိသည်ဟု ပြောကြားခဲ့ သည်။ အဆိုပါ မွန်ပြည်နယ် အထူး စီးပွားရေးဇုံသည် အိန္ဒိယသမုဒ္ဒရာကမ်းခြေပေါ်တွင် တည်ရှိပြီး၊ ထိုင်းနိုင်ငံ၊ ဗီယက်နမ် နိုင်ငံတို့နှင့် အဝေးပြေးလမ်းမကြီးများ ဖေါက်လုပ်၍ မွန်ပြည်နယ်နှင့် ဆက်သွယ်သွားမည်ဟုဆိုသည်။ ထို အထူးစီးပွားရေး ဇုံ တွင် လာရောက် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံကြရန် နိုင်ငံတော်၏ အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်က ဂျပန်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများရှင်အား တိုက်တွန်း နှိုးဆော်ခဲ့သည်။ နိုင်ငံခြားစီးပွားဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန ၀န်ကြီး ဦးသောင်းထွန်းက မွန်ပြည်နယ် အထူး စီးပွားရေးဇုံ အသစ်သည် အခြားသော စီးပွားရေးဇုံအားလုံးထက် ပိုမို ကြီးမား၍ ဆက်သွယ်ရေးစနစ်လည်း သာလွန်ကောင်းမွန် လိမ့် မည်ဟု ယင်းအွန်လိုင်းအစည်းအဝေး၌ ပြောကြားခဲ့သည်။ မြန်မာနိုင်ငံအနေဖြင့် တိုက်ရိုက်နိုင်ငံရေးရင်နှီးမြှုပ်နှံမှုများ စီးဝင် လာရေးကို အထူးမက်လုံးပေးဆွဲဆောင်လျှက်ရှိရာ၊ ဂျပန်နိုင်ငံအား အဓိကရင်နှီးမြှုပ်နှံသူအဖြစ် အားထားမျှော်လင့်လျှက်ရှိ သည်။ မြန်မာ အစိုးရကိန်းဂဏန်းများအရ ၂၀၁၁ မှ ယခုအထိ ဂျပန်နိုင်ငံဋ္ဌ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုပမာဏသည် အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၁ ဒဿမ ရ ဘီလီယံ ကျော်လွန်သွားပြီဟု သိရသည်။
ဂျပန်-မြန်မာစီးပွားရေးဆောင်ရွက်မှု ကော်မတီ (JMEC) ဥက္ကဋ္ဌ ကိုဘာယာရှီ (Kobayashi)၏ အဆိုအရ ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် ပြဿနာကြောင့် ကုန်စည်စီးဆင်းမှု အပြောင်းအလဲဖြစ်ပေါ်လာသဖြင့် စက်ရုံများ နေရာအပြောင်းအရွှေ့ဖြစ်လာမည်ဟု ဆိုသည်။ မြန်မာနိုင်ငံအနေဖြင့် စက်ရုံအချို့လက်ခံရရှိနိုင်ဖွယ်ရှိသည့်အချက်ကို မျှော်လင့်နိုင်သည်ဟု ဆိုသည်။ မြန်မာ နိုင်ငံတွင် အဓိကအားဖြင့် နိုင်ငံခြားဈေးကွက်အတွက် ထုတ်လုပ်သော အထည်ချုပ်စက်ရုံများသည် ကိုဗစ်-၁၉ ရောဂါဘေး ၏ ဒဏ်ကို အပြင်းထန်ဆုံးခံရသည်။ သို့ရာတွင် အထည်ချုပ်စက်ရုံလုပ်ငန်းများသည် ကိုဗစ်အလွန် ၂၀၂၁ တွင် ပြန်လည် နလန်ထလာဖွယ်ရှိကြောင်း ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ဆိုသည်။
လတ်တလောတွင် အထူးစီးပွားရေးဇုံ ၃ ခုရှိသော်လည်း သီလဝါဇုံတစ်ခုတည်းသာ ဂျပန်နှင့် ပူးတွဲလုပ်ဆောင်ခြင်းဖြင့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု ရှိနေသည်ဟု ဆိုသည်။ ရခိုင်ပြည်နယ်ရှိ ကျောက်ဖြူ စီးပွားရေးဇုံမှာမူ တရုတ်နိုင်ငံနှင့် ပူးတွဲ လုပ်ကိုင် နေဆဲဖြစ်သည်။ ကျောက်ဖြူ ရေနက်ဆိပ်ကမ်းသည် အိန္ဒိယသမုဒ္ဒရာသို့ ထွက်ပေါက်ရရှိမည့် တရုတ်နိုင်ငံ၏ မဟာဗျူဟာ မြောက် စီမံကိန်း ဖြစ်သည်။ ရေနက်ဆိပ်ကမ်းနှင့် အတူ စီးပွားရေး အထူးဇုံ တည်ဆောက်မည့် စီမံကိန်းကြီးကို ဦးဆောင် အကောင်အထည် ဖော်မည့် ကုမ္ပဏီမှာ CITIC ဖြစ်သည်။ ယင်းကုမ္ပဏီက ၂ဝ၁၅ ခုနှစ် ကတည်းက လုပ်ပိုင်ခွင့် ရထားခဲ့ သည်ဟု ဆိုသည်။ ကျောက်ဖြူ ရေနက်ဆိပ်ကမ်းသည် တရုတ်အစိုးရ၏ မဟာဗျူဟာမြောက် စီးပွားရေးစီမံကိန်းဖြစ်ပြီး၊ ကမ္ဘာ့အရှေ့ခြမ်းနှင့် အနောက်ခြမ်းကို ကုန်းလမ်း-ရေလမ်း နှစ်မျိုးလုံးအသုံးပြုလျှက် ကုန်သွယ်ရေးလမ်းကြောင်းကြီး ချိတ်ဆက် ဖော်ဆောင်ရေးကို ရည်ရွယ်သည်။ ရပ်ဝန်းတစ်ခု လမ်းကြောင်းတစ်သွယ် One Belt, One Road စီမံကိန်းကြီး တွင် ကျောက်ဖြူ စီမံကိန်းသည် အရေးကြီးသည့် အစိတ်အပိုင်း ဖြစ်သည်ဟု လေ့လာသူများက သုံးသပ်ကြသည်။
မြန်မာ-တရုတ် ရေနံစိမ်း ပိုက်လိုင်းသည် မဒေးကျွန်းမှ စတင်၍၊ ဓာတ်ငွေ့ ပိုက် လိုင်းသည် ကျောက်ဖြူမြို့နယ်မှ စတင် တည်ဆောက်ထားသည်။ ထို ပိုက်လိုင်း ၂ သွယ်သည် ရခိုင်၊ ရှမ်းပြည်နယ်၊ မကွေးတိုင်းနှင့် မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးတို့ကို ဖြတ်သန်းဖောက်လုပ်ထားသည်။ ရေနံစိမ်းပိုက်လိုင်းသည် ရ၇၁ ကီလိုမီတာ ရှည်လျားသည်။ သဘာဝဓာတ်ငွေ့ပိုက်လိုင်း သည် ရ၉၃ ကီလိုမီတာရှည်လျားသည်။ ၎င်းးစီမံကိန်းကို မြန်မာနိုင်ငံအစိုးရ၊ တရုတ်၊ အိန္ဒိယနှင့် ကိုရီးယားနိုင်ငံများရှိ ကုမ္ပဏီ ၆ ခု ရင်းနှီးမြှုပ်နှံထားကြောင်း မီဒီယာသတင်းများအရ သိရသည်။ ရွှေသဘာဝဓာတ်ငွေ့ပိုက်လိုင်းကြောင့် လယ်ယာမြေများ သိမ်းဆည်းခံရခြင်း၊ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ထိခိုက်ပျက်စီးခြင်း များ ကြုံတွေ့ရသော်လည်း ပိုက်လိုင်းမှ ရရှိသည့် အကျိုးအမြတ်များကို ဒေသခံများ ခံစားရခြင်းမရှိကြောင်း “ရွှေ သဘာဝ ဓာတ်ငွေ့လှုပ်ရှားသူများအဖွဲ့” (The SHWE Gas Movement) က အစီရင်ခံစာထုတ်ပြန်ခဲ့ဖူးသည်။
ထို့ပြင် ရန်ကုန်အနောက်ဖက်ကမ်းတွင်လည်း အထူးစီးပွားရေးဇုံတစ်ခုကို တရုတ်နိုင်ငံနှင့် အစပျိုး လုပ်ကိုင်နေသည်ဟု အွန်လိုင်းအစည်းအဝေးတွင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ပြောကြောင်း ၂၀၂၀ ဇူလိုင်လ ၂၉ ရက်နေ့ ထုတ် Nikkei Asian Review ၌ ဖေါ်ပြသည်။ အဆိုပါ ရန်ကုန်အနောက်ဖက် စီးပွားရေးဇုံ စီမံကိန်းတွင် ဂျပန်ကုမ္ပဏီများ ၀င်ရောက်လုပ်ကိုင်ရန် ဖိတ်ခေါ်သွားမည်ဟုလည်း ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ပြောကြားခဲ့သည်။
ဂျပန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး မစ္စတာမိုတေဂီနှင့် နိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်း စုကြည်တို့ သြဂုတ်လ ၂၄ ရက်နေ့၌ တွေ့ဆုံခဲ့ကြပြီးနောက် ၄ ရက်အကြာတွင် ဂျပန်ဝန်ကြီးချုပ် ရှင်ဇိုအာဘေးသည် ကျန်းမာရေးအခြေအနေ ကြောင့် နှုတ်ထွက်ခွင့် တင်ခဲ့ကြောင်း သတင်းထွက်ပေါ်ခဲ့သည်။ ရှင်ဇိုအာဘေးအား ဆက်ခံဖွယ်ရှိ့သူများအဖြစ် ဒုတိယ ၀န်ကြီးချုပ် တာရိုအာဆိုနှင့် LDP ပါတီ၏ မူဝါဒရေးရာခေါင်းဆောင် ကီရှိဒါတို့ကို ထင်ကြေးပေးကြကြောင်း ကြားရသည်။ ဂျပန်နိုင်ငံရေး လေ့လာသုံးသပ်သူတို့အဆိုအရ ၀န်ကြီးချုပ်အသစ် ဖြစ်လာမည့်သူအနေဖြင့် မူလရှိရင်းစွဲ နိုင်ငံခြားရေးမူဝါဒ မှ သွေဖည်သွားရန် အကြောင်းမမြင်ဟု ဆိုကြသည်။ ထို့ကြောင့် မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ဂျပန်အစိုးရ၏ မူဝါဒများ အပြောင်း အလဲရှိလိမ့်မည်မဟုတ်ဟု သုံးသပ်ကြသည်။ ဂျပန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး မစ္စတာမိုတေဂီ က မြန်မာနိုင်ငံရွေးကောက်ပွဲကို လေ့လာစောင့်ကြည့်မည့် ဂျပန်အစိုးရ၏ အထူးသံတမန် စေလွှတ်ရန်ရှိကြောင်း ပြောကြားခဲ့သည်။ ဂျပန်အစိုးရ၏ အထူးသံ စေလွှတ်ခဲ့ပါက မြန်မာနိုင်ငံ ရွေးကောက်ပွဲ၏ ဒီမိုကရေစီပုံရိပ်ကို အထောက်အကူဖြစ်စေလိမ့်မည်ဟု ဝေဖန်သုံးသပ်မှုများ လည်း ပေါ်ထွက်နေပေသည်။
1. ဂျပန်-မြန်မာ ချစ်ကြည်ရေး တိုးတက်မှုကို ရည်ရွယ်သည့် ဂျပန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး Mr. Motegi ၏ သတင်းစကား (Submitted by NPE on Mon, 08/24/2020)
2. Nikkei Asian Review: Suu Kyi courts Japan investment with new economic zone (29-7-2020)
3. Deciphering Myanmar’s Peace Process – A Reference Guide 2017-2018, First Edition 2019
# ခေတ်ရနံ့ မဂ္ဂဇင်း Khit Ya Nant Online Media ၌ ဖေါ်ပြခဲ့သည့် ဆောင်းပါး။ https://bit.ly/2HB03lq
ဇင်လင်း - မျက်မှောက် မြန်မာ့ နိုင်ငံရေးအရွေ့နှင့် ဂျပန်နှင့် တရုတ်နိုင်ငံတို့၏ ဗျူဟာမြောက် အခင်းအကျင်းများ Reviewed by MoeMaKa on 11:38 AM Rating: 5